Sheekh Masar Udhashay Oo Ku Baaqay In la Sameeyo Ciidan Muslimiintu leeyihiin | Gaaroodi News
Sheekh Masar Udhashay Oo Ku Baaqay In la Sameeyo Ciidan Muslimiintu leeyihiin
May 17, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Sheekh Dr Axmed Cumar Haashim
Caalimka Reer Masar ee Sheekh Dr Axmed Cumar Haashim ayaa madaxda dowladaha Islaamka ugu baaqay in ay sameystaan “ka hortag” xilli uu Khudbaddii Jimacaha ka jeedinayay masjidka Al-Azhar.
Sheekha ayaa si kulul uga hadlay rabshadihii ka dhacay Qudus, waxaana uu Israa’iil ku eedeeyay inay ku xadgudubtay muqasaadka masjidka Al-Aqsa.
“Waxaan ugu baaqayaa madaxda Carabta iyo kuwa Islaamka inay sameeyaan ciidan ka hortagga [dhibaatooyinka jira]….. Wixii xoog lagaaga qaata waxaa lagu soo ceshadaa xoog,” ayuu yiri Sheekhan mar hogaamin jiray jaamacadda Al-Azhar
Shacabka Masar ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay khudbadda Sheekha, waxaana kuwa ku kacsan dowladda ay sheegeen in ay tahay mid lagu dejinayo dareenka dadweynaha ee ku aaddan waxa ka socda Gaza.
Taageerayaasha xukuumadda Abdulfataax Al-sisi ayaa sheegay in Sheekh uu muujiyay mowqifka dowladda Masar ee ku aaddan taageerada qadiyadda Falastiiniyiinta. Masar oo xuduud la leh Gaza ayaa horay u muujisay inay dhexdhexaad ka tahay colaadda taagan.
Qaar kamid ah dadka ka faallooda arimaha Masar ayaa sheegay in dowladda Masar ay khudbadda cadaadis ku saarayso Israa’iil, maadaama ay guulaysan waayeen dedaallada Qaahira ee ku aaddan in xabbada la joojiyo.
Wasiirka arimaha dibedda Masar, Saamax Shukri, ayaa Talaadadii hore shaaciyay in Israa’iil ay dhegaha ka furaysatay baaq ay Masar u dirtay oo ahaa in la joojiyo colaadda Gaza.
Falcelinta Shacabka Masar
Dadka baraha bulshada wax ku qora ee Masar ayaa intooda badan ka xumaaday dhibaatada haysata Falastiiniyiinta, waxaana ay dowladdooda ugu baaqeen inay qaado tallaabooyin ay kamid tahay furitaanka marinka Rafax.
Dhanka kale waxaa jiray dad dhaliilay qaabka uu ururka Xamaas u wajahay xaaladda taagan, isla markaana taageero u muujiyay Israa’iil iyo xaqa ay u leedahay in ay is difaacdo.
Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil ayaa saacadihii hore ee Isniinta duqeymo horleh ka fuliyay Gaza, xilli ay colaadda gashay todobaadkii labaad.
Ururka Xamaas ayaa gantaallo dheeraad ah ku ganay koonfurta Israa’iil. Mas’uuliyiinta Falastiin ayaa sheegay in Axadii ay dhinteen dadkii ugu tirada badnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka.
Ra’iisal wasaaraha Israa’iil, Benjamin Netanyahu, ayaa ku gacan-sayray baaq caalami ah oo ah in xabbada la joojiyo